Etu Uruguay siri bụrụ onye ndu mba n’enweghị ike ikuku | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Etu Uruguay si buru mba mbu n’imi ikuku
Tomas Bigordà | | Ike ikuku, Ike imeghari ohuru
Kedu otu obere mba na-enweghị mmanụ ga-esi belata ọnụahịa ọkụ eletrik ya, belata ịdabere na mmanụ, ma bụrụ onye ndu na ume ọhụrụ.
N'ime afọ 10 gara aga, Uruguay enwetala ihe yiri ka ọ gaghị ekwe omume, bụrụ mba nwere ọkụ eletrik kachasị elu site na ikuku ifufe na Latin America na otu n'ime isi okwu metụtara ụwa niile.
Site na nke a, mba ahụ belatara nsogbu ọ nwere maka mgbanwe ihu igwe na ụkọ mmiri ozuzo na-eto eto na-emetụta mmiri ọkụ.
1 Na mmanu di onu ala bia na njedebe nke mmeghari ohuru?
2 Ọnọdụ dị mma maka ike ikuku
3 Mee atụmatụ afọ 25
4 Mgbanwe ihu igwe na ọkọchị
4.1 Ike ikuku nwere ike ịgbakwunye ike hydroelectric ugbu a.
Na mmanu di onu ala bia na njedebe nke mmeghari ohuru?
Ugbu a, ihe kariri 30% nke oku eletrik na mba South America sitere na ikuku. Dịka ọmụmaatụ, na Brazil, pasent karịrị 6%. Na mgbakwunye, Uruguay na-atụ anya mmụba ọzọ dị mkpa na ọnwa ndị na-abịanụ.
Dị ka isi nke National Energy Directorate nke Uruguayan Ministry of Industry, Energy and Mining, Olga Otegui si kwuo: "Anyị na-atụ anya na n'afọ a, inye ọkụ eletrik site na ike ikuku ga-abụ karịa 35%"
Site na 2017, mba ahụ na-achọ 38% nke ọkụ eletrik sitere na ifufe, nke a ga-etinye ya nso onye ndu ụwa Denmark, yana 42%, dị ka data sitere na Council Ike Ọchịchị Global, Global Wind Energy Council, GWEC maka acronym ya na Bekee.
Mba, mba ndị ọzọ nwere nkwanye ọzọ ha bụ Portugal, yana 23%, Spain, 19%, na Germany, 15%.
Ọganihu nke ahịa ifufe na Uruguay dị ezigbo mkpa, ka Tabaré Arroyo si kwuo, onye ndụmọdụ na ume ọhụrụ maka World Wide Fund for Nature: «Na 2005 enweghị ike ikuku na Uruguay. Site na 2015 enweburu ikike arụnyere karịa 580 MW ma na 2020 a kwenyere na a ga-enwe ikike arụnyere karịa 2.000 MW, "Arroyo gwara BBC Mundo.
Ọnọdụ dị mma maka ike ikuku
Kedụ ka Uruguay si jisie ike gbanwee matriks ike ya n'ụzọ dị egwu? Mba ahụ nwere ọnọdụ magburu onwe ya maka ike ikuku, ya mere ọ dị mma na o juru ha anya ọbụna ndị ọkachamara ahụ n'onwe ha.
"U.S. kwa O juru anyị anya n'ihi na anyị bụ obodo nke enyemaka ya bụ ọkara-ala, ala dị larịị. Ma mgbe ebido usoro ahụ na 2005, anyị chere na naanị ụfọdụ ebe nwere ike ịnwe ezigbo ọnọdụ maka ugbo ikuku ndị a. N'aka nke ọzọ, nha ndị ahụ mere ka anyị hụ na anyị nwere nkwụsi ike nke ezigbo ikuku ikuku kwa afọ, "ka Otegui kwuru.
Ifufe ọsọ na-agbanwe, n'ihi ya a ikuku igwe ọ na-arụ ọrụ kachasị dị n'okpuru n'okpuru ike aha ya nke eji mepụta ya.
Ya mere, isi ihe ngosi nke arụmọrụ nke ugbo ikuku bụ ikike ikike, mmekọrịta dị n'etiti ike ahụ bụ n'ụzọ dị irè site na oge, na nke gaara eme ma ọ bụrụ na ọ na-agba ọsọ na-enweghị nkwụsị na ike aha.
«N’etinyeghi ọtụtụ nkọwa nkọwapụta nke teknụzụ, egosiri na ala ikuku ikuku 50 MW na Uruguay ruru ihe ikike ruru n’etiti 40% na 50% maka ụdị ike. ikuku ikuku dị ka V80, G97, V112 na ndị ọzọ ». N'ụzọ dị iche, ikuku ifufe na US, dịka ọmụmaatụ, rụrụ ọrụ na 2014 na ikike nke 34% na 2014, dịka data sitere na Ngalaba Energy US.
Mee atụmatụ afọ 25
E wezụga ọnọdụ ndị dị mma, ihe dị mkpa bụ atụmatụ afọ 25 gbasara amụma ike. Ekwenyekwara atụmatụ ike 2005-2030, dị ka iwu obodo, ndị otu niile ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwere nnọchiteanya ndị omeiwu, ihe na-abụghị ihe nkịtị, enwere ihe gbasara ọdịmma.
Atụmatụ ume afọ 25 nyere usoro ntọala maka ndị na-etinye ego ma dọta ụlọ ọrụ nkeonwe mba ụwa.
Dị ka Otegui si kwuo, "Onweghi ego enyem aka", mana ha juo "nghọta na nchekwa nye onye oru ego".
«Ha na-ekwe nkwa price ha nyere na na price na-gbanwee site oke na e kwetara. Ha maara nke ọma site na mgbe e gosipụtara ụkpụrụ nduzi na otu esi akwụ ụgwọ ahụ na ha ga-agbanwenkwekọrịta nwere ike ịbụ afọ iri abụọ".
Mgbanwe ihu igwe na ọkọchị
Ighapu ikike enyela Uruguay afọ ojuju karịa 90% nke ọkụ eletrik ya ike mmeghari ohuru, tinyere ikuku, hydroelectric, biomass na ike anyanwụ.
Uruguay enwetala otu ebumnuche bụ dị site na mbido: mee ka ngwa agha nke mba gbasie ike n'agbanyeghị mgbanwe ihu igwe.
Dị ka ndị ọrụ dị iche iche si kwuo, ndị Uruguayan tụrụ egwu ụkọ mmiri ozuzo: “Anyị kwenyesiri ike na anyị ga-ebelata ihu igwe a (…). Mgbe enwere isi unwu alaAnyị nwere nnukwu mbubata mmanụ maka ọgbọ na-ekpo ọkụ, ihe ndị a niile gbanwere kpamkpam na nnabata nke imeghari ọhụrụ ».
Ike ikuku nwere ike imeju ugbu a hydroelectric.
«Uruguay nwere ikike hydroelectric arụnyere nke usoro 1500 MW, bụ nke a na-achịkwa iji ya mee ihe dịka akụ ikuku si dị, si otú a na-ekwe ka nchekwa nke hydroelectric ike ma jiri ya rụọ ọrụ nke ọma, ”ka Mullin kọwara.
Otegui, n'aka nke ya, kwuru na na nnabata nke mmeghari ohuru, Uruguay nwetara "ọbụbụeze na nnwere onwe site na mbubata ọkụ eletrik." "Anyị abịaworị afọ abụọ n'usoro nke anyị na-ebubatabeghị ike ọkụ eletrik."
“N’ihi mgbanwe mgbanwe ihu igwe, usoro mmiri ozuzo ga-agbanwe, oge ọkọchị ga-adị ogologo, na-akawanye njọ ma na-akawanye njọ. N'ihi ya, ịdabere na mmiri mmiri bụ n'ezie nzọ na enweghị nchekwa ume«. Uruguay, jiri amamihe, jiri amamihe mee nzọ dị ọhụrụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Etu Uruguay siri buru mba mbu n’ike ikuku
Ihe mmeghari ohuru nwere ike inye aka na ebili mmiri
Ọzara na-aga n'ihu na Spain kwa ụbọchị